Yaa faafiyay qoraal Beesha Hawiye u gudbisay Ra’iisul Wasaare Rooble ? – AfmoNews
Guddi ay wakiisheen Odoyaasha dhaqan iyo waxgaradka Beelaha Hawiye ayaa 14 bishan la kulmay Ra”iisul Wasaare Rooble, iyadoo guddigan qoraal cabasho ah u gudbiyay Ra’iisul Wasaaraha.
Walaaca qoraalkaas ayaa diiradda saarayay guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha Doorashooyinka.
Qoraalka ayay odayaashu ku sheegeen tuhunno muujinaya hannaanka ay Dowladda Federaalka u waddo arrimaha Doorashooyinka in aysan dhex dhexaad aheyn.
Odayaasha ayaa ka digay in dowladdu aaney marna ku fekerin boob doorasho, isla markaana aaney ciidamada amniga u isticmaalin arrimaha siyaasadda.
Hase yeeshee qoraalkaas oo ahaa mid aan loogu talogalin in Baraha bulshada lagu faafiyo sida uu sheegay Muxudiin Xasan Afrax, oo ka mid ahaa Odayaashii la kulmay Ra”iisul Wasaaraha.
“Ra”iisul Wasaaraha waxaan ugu tagnay arrin lid ku ah Beelaha Hawiye, arrintaas waan ka hadalnay waana u gudbinnay waxaan qabnay, isaguna si fiican ayuu nooga qabtay. Ra’iisul Wasaaraha, wuxuu noo sheegay inuu arrintaas haddii ay jirto uu wax ka qabanayo.
Muxiyaddiin Xasan Afrax ayaa sheegay in wax laga xumaado tahay in qoraalkaas lagu faafiyo baraha bulshada, isla markaana uu markii hore uusan aheyn qoraal loogu tala galay in saxaafada la siiyo.
“Arrintaas waxaa isku ogeyn sidii raysal wasaaraha loogu dhiibay inay ahaato, iskuma ogeyn baro bulsho in loo qeybiyo iskuma ogeyn baro bulsho loo qeybiyo arrintaas xadgudub ku tahay odayaasha hawiye ayay ku noqoneysa Raysal wasaaraha waxba uma dhibeyso, laakiin aniga waxay naga xumeyneysa magacii iyo is aaminidii, baraha bulshada iyo warbaahinta waxbaa la dhigaa, laakiin wax aan lagu talagelin ma fiicno in la dhigo”ayuu yiri Muxiyaddiin Xasan Afrax.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay inay arrintaas ka raalli gelinayaan Ra’iisul Wasaaraha in warqadaas bannaanka u soo baxdo, sidoo kale ay ka raalli gelinayaan dowladda oo dhan, baraha bulshada qoraalka lagu arkay ee aan loogu tala gelin, isagoo aan carabaabin cida arrintaas sameysay, balse odayaasha dhexdooda ay ka baxday.